I-China isilivere yambethe i-polyamide yokuhambisa / yokukhusela abenzi kunye nabathengisi | 3L isicatshulwa
Isilivere esicocekileyo isambatho se polyamide
Olona luvo luhamba phambili lokuzikhusela kunye nemisebenzi ye-antibacterial, isilivere egalelwe izinto ezininzi ezisisiseko se-amide / yenayiloni, inxiba ngakumbi, ithambile kwaye ikhululekile. Yimveliso yobuchwephesha obuphezulu efunyenwe ngokudibanisa isigxina sesilivere kwinto yenayiloni kusetyenziswa ubuchwephesha obukhethekileyo. Olu lwakhiwo alwenzi nje ukuba ifayibha yesilivere igcine impahla yepropathi yoqobo, kodwa ikwanika wonke umsebenzi womlingo, isiphumo sesilivere. Njengempahla yendalo, isilivere isempilweni ngokupheleleyo, okusingqongileyo / eluhlaza kunye nokugcina.
Uphawu Main: Ukuxhathisa okuphantsi kakhulu, ukusebenza okuphezulu kokukhuselwa, ukukhusela amaza ombane, anti-radiation, antibacterial, deodorant (inkunkuma), ukuphelisa umbane ongashukumiyo, ukuvuselela izihlunu, ukulawula ubushushu bomzimba, anti-UV, luhlaza ngokwendalo, umoya ophezulu wokungena, onokutsha / onokuphinda usetyenziswe. Ukukhanya, isilika ukuziva uthambile.
Izicelo eziphambili: Izinto ezifanelekileyo zokukhusela, i-anti-radiation, iimpahla ezifanelekileyo, izixhobo kunye neempahla zekhaya, iimpahla zokulwa ne-bacterial, iimaski, iiglavu kunye nempahla yasekhaya, iimveliso zonyango, ezemidlalo, ukuzuza kwemisipha, iimveliso eziqhubayo, iimveliso ezichasayo.
Ukusebenza kokukhusela: 60.0dB-71.0dB
Isilivere iqhuba kakuhle kwaye inomsebenzi wokhuselo lwe-electromagnetic. Xa abantu benxibe iimpahla ezichaphazela umbane / zombane ukunxibelelana nesixhobo se-elektroniki, isinxibo se-anti-electromagnetic wave ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo siqhuba amaza ombane, ngaloo ndlela sikhusela umzimba kumaza ombane.
Egqithileyo Isilivere camera spandex conductive / uvikele ilaphu
Okulandelayo: RFID Conducting enemingxuma
Ijongene nesilivere yokuqhuba ilaphu
Amabini ajongene nomlilo amalaphu aqhubayo